बिमस्टेक सम्मेलनको अाज दोस्रो दिन, कस्तो छ तालिका ? – Everest Dainik – News from Nepal
बिमस्टेक सम्मेलनको अाज दोस्रो दिन, कस्तो छ तालिका ?
काठमाडौं । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन शुक्रबार समापन छ । बिहिबार उद्घाटन भएको सम्मेलन शुक्रबार काठमाडौं घोषणा पत्र तय गर्दै समापन हुन लागेको हो ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन आज बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होटल सोल्टीको पुलसाइडमा सबै राष्ट्रप्रमुखको सम्मानमा ‘रिट्रिट’ दिने व्यवस्था मिलाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपछि बिहान ११ बजेबाट सुरु हुने बिम्स्टेकको दोस्रो सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने समझदारीका बुँदाहरु जानकारी गराउने छन्।
सम्मेलनमा बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’को समझदारीपत्र (एमओयू)मा सातै देशका मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने कार्यत्रम छ ।
यसैगरी रेल, सडक, हवाईमार्ग र अप्टिकल फाइबरका माध्यमबाट सदस्य मुलुकबीच सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिजस्ता आर्थिक विकासका मुख्य क्षेत्र सम्बन्धमा सम्मेलनमा छलफल हुनेछ र अन्त्यमा काठमाडौँ घोषणापत्र तय हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सोपश्चात् नेपालले संगठनको अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गर्दै सम्मेलन सकिने छ।
ट्याग्स: BIMISTEC, बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन